အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ….. ။ စိတ်ကူး ပေါက်ရာ တွေ ရေးတက်သော ကျနော် မောင်ဘုန်း တစ်ယောက် အခုရက်ပိုင်း မှာ အချိန် တော်တော် လေးပေး ကာ … ဝတ္တု တို လေးတစ်ပုဒ် ကို ရေးသား မိ ပါတော့သည်။
ဒီ ဝတ္တု တိုလေး ဟာ ကျနော် ဘဝ မှာ ပမထ ဦး ဆုံး ရေးဖြစ် တဲ့ ဝတ္တု တို လေး ဖြစ်သလို ၊ အမြဲတမ်း သတိတရ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းရာ လေးကို အခြေခံ ရေးသား မိသောကြောင့် မောင်ဘုန်း ဘဝ အတွက် အမှတ်တရ တစ်ခုအဖြစ် ထာဝရ ရှိနေမဲ့ ဝတ္တု တို လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
သည် ဝတ္တု တိုလေး ရေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို အနည်းငယ် ပြောပြလိုပါတယ် ။ လွန် ခဲ့ သော ၃ နှစ်လောက် က ကျနော် ထိုင်း နိုင်ငံသို့ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စ လေး ရှိသည်က တစ်ကြောင်း ၊ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဖိတ်ကြား သည်က တစ်ကြောင်း ၊ ရောက်ဖူး ချင်းသည်က တစ်ကြောင်း …. ကြောင့် ၃ ရက်တာ အလည် သဘော မျိုး သွားရောက် ခဲ့ပါသည် … ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စ များ လုပ်ဆောင်ပြီး သောကြောင့် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ နှင့် ဘန်ကောက် မြို့ နေရာ တော်တော် များများ ကို အလည်ပတ် ထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည် ။ ကျနော် ပြန်မည့် ည တွင် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ နှင့် ညီဝမ်းကွဲ တော် စပ်သူ ၏ နေအိမ် တွင် သူငယ်ချင်း မှ ခေါ်သွား ပါသောကြောင့်
တစ်ည တာ တည်းခို ခဲ့ရသည် ။
ဘန်ကောက် မြို့နှင့် ခပ်ဝေးဝေး မှာ ရှိသော ထိုး အိမ် လေး သည် ကျနော် အတွက် မေ့ မရနိုင်အောင် ထူးခြားသော ခံစားမှု့များပေးခဲ့ ပါတယ် ။ အိမ်သုံး ပစ္စည်း ဟောင်းများ ရှိသော ထို အိမ် လေး ၏ သန့် ရှင်း တောက်ပ မှု့ကို ဦးစွာ သတိထားမိ၏ ။ အိမ် ရှင် လင်မယား နှစ်ဦး ၏ တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး ကြည်နာ ယုယ မှု့ များကို ကျနော် ရေးပြတက် မည် မဟုတ်ပါ ။ အမြဲတမ်း တစ်တစ်ခုခု လုပ်နေတက်သော အိမ်သူမ နှင့် သူမ ၏ ဘေးတွင် ကူညီပေးနေတက်သော ခင်မွန်း သည် တို့ ၏ အေးချမ်းသော အိမ် လေး မှ ကြင်နာနွေးထွေးမှု့သည် ဧည့်သည် ဖြစ်သော ကျနော် သည်ပင်လျှင် ဤ ကြင်နာနွေးထွေး မှု့ ကို ခံစားရမိ၏ ။
တစ်ညတာ တည်းခို ပြီး အပြန် လမ်း တွင် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ အား ထို အိမ်းလေး နှင့် အိမ် ရှင် လင်မယား အကြောင်းကို စပ်စု မိ ပါသည် ။ သူငယ်ချင်း ပြောပြ ၍ အကြောင်းစုံ သိရသော ကျနော် မှာ ထို လင်မယား နှစ်ဦး ၏ တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး တန်ဖိုးထား ချစ်မြတ် တက် သော ဘဝ လေးကို လေးစာမိပါတော့ သည် … ။
ထို့ ကြောင့် ကျနော် ၏ blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း များ နှင့် မတော် တဆ ဖတ် မိသော သူ များအား ချစ်သူ နှစ်ဦး၏ တန်ဖိုး ထား ချစ်တက်မှု့ကို လေးစား စေရန် နှင့် မိမိ ဘဝ မှာ တစ်စုံ တစ်ဦး ၏ တန်ဖိုး ထားတက်ကို နားလည်တက်စေရန် ၊ သူငယ်ချင်း ပြောပြသော အထက်ပါ လင်မယား နှစ်ဦး ၏ ဖြစ်ရပ်များ ကို အခြေခံကာ ဤ “ တန်ဖိုး ” ဟု အမည်ပေးထား ဝတ္တု တို လေးကို ရေးသား မိ ပါသည် … ။
စာဖတ်သူ များအနေ နှင့် ကျနော် ရည်ရွယ်လို သော ခံစာမှု့ရသ မရရှိပါက စာ ရေးသားမှု့အလွန် ညံ့ သော ကျနော် မောင်ဘုန်း ​၌ သာ တာဝန် ရှိပါ သည် …. ။
လောကကြီးမှာ ရှိသော သက်ရှိ သက်မဲ့
အရာအားလုံးကို … ကျနော် တို့တန်ဖိုး ထားတက် လျှင်
တန်ဖိုး ရှိနေတက်ပေသည် ….
ဥပမာ တစ်ခုအနေ နှင့် ပြောရလျှင်
စိန် ၊ ရွှေ ၊ ငွေ ၊ ရတနာ တို့ ကို လူ့ အမိုင်း အဆက်ဆက်
တန်ဖိုး ထားခဲ့ သောကြောင့် … တန်ဖိုး ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်
ထို ပစ္စည်း များ ဟာ ၊ ကျနော် တို့ အသက်ရှင် မို့စားသောက် နေရသော
ဟင်းရွက် ပင်း လောက် မျှ တန်ဖိုး ရှိသည် မဟုတ်ပါ ….
ဘာအကြောင်း ပြချက် မှ မရှိပဲ သူမ ကို ချစ်မိ ခဲ့ပါသည်
သူမ ရှင်သန် ခွင့် ရတဲ့ အချိန်လေး မှာ
ကျွန်တော် မြတ်နိုး တန်ဖိုးထား ချစ်ခဲ့ရ၏
တစ်နေ့သူမ ထွက်ခွာ သွာလျှင်
မြတ်နိုးခွင့် … တန်ဖိုးထား ခွင့် ရလိုက်သည့် အတွက်
ကျွန်တော် အတွက် ဖြေသာလိမ့် မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါ သည်
ကျွန်တော် (သို့ ) ကျော်ဇင်
ပညာမတက် ၊ ဉာဏ်နည်း ဆင်းရဲ တဲ့ ကျွန်မ ဘဝ ကို
ရုန်းထွက်မို့ကျွန်မ ဆုံးဖြတ် ချက် တစ်ခု ချမိ၏
ကျွန်မ ဆုံးဖြတ် ချက်တွေ မှား သွားပြီ ဆိုတဲ့ အသိ နှင့် ကျွန်မ သေဆုံး ခဲ့ပါသည်
ကျွန်မ ရှင်သန် ခြင်း ဟာ မောင့် အတွက်သာ ဖြစ်၏
ကျွန်မ ရှင်သန် ခွင့်ရတဲ့ အချိန် လေးမှာ
မောင့် … ကို တန်ဖိုး ထား ချစ်မြတ်နိုး လိုသည်
သည့် အတွက် သေဆုံးခြင်း ဆိုတာ ကို ကျွန်မ ကြောက်နေမည် မဟုတ်ပါ … ။
ကျွန်မ ကြောင့် မောင် … တစ်တစ် ခုခု ဖြစ်မှာ တော့ …
ကျွန်မ အရမ်း ကြောက်မိသည် …..
ယမင်း (သို့ ) ယမင်းသူ
ကျွန်တော် စိတ် အတော် ပင် တုန်လှုပ်နေမိပါသည် ။ လာရာလမ်း အတိုင်း ကျွန်တော် ခြေလမ်း တွေ မမှားအောင် တော်တော် ဂရုစိုက်နေရ ၏ ။ ဆရာဝန် ပြောလိုက်သော စကားက ကျွန်တော် နားထဲက အခု ချိန်ထိ မထွက်သေး ပါ ။
အမှန်ဆို ဒီ အခြေနေကို ကျွန်တော် ကြို တွေးကြည့် ပြီးသား ပါ ။ ဘဝ ဆိုတာ လက်တွေ့ရင်ဆိုင် ရင် စိတ်ကူးတွေ နဲ့လွဲနေတက်တာလည်း ကျွန်တော် နားလည်း ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တိကျတဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်တစ်ခု ကို အမြန် ချ ရတော့မည် ။ ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက် အတွက် ကျွန်တော် ဘဝ ရဲ့ အချိန် တစ်ခု မှာ နောင်တ ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုး မဖြစ်ရအောင် ဆုံးဖြတ် ရမည် ။ ကျွန်တော် ရင်ထဲမှာ တော့ မေးခွန်း တစ်ခု ပဲ့တင်သံ ထပ်နေပါတော့ သည် ။
ကျွန်တော် NGO ဆေးခန်း ရဲ့ အပြင်ဘက်သို့ရောက်ခဲ့ပါပြီ ....။
အသင့်တွေ့ သော အငှားကား ပေါ်သို့တက်လိုက်ပြီ
ကားသမား မျက်နှာ ကိုတောင် သေချာ မကြည့်မိ ကျွန်တော် သွားလိုရာသို့ပြောလိုက်သည် ။
ကား စထွက် ပြီးသည် နှင့် ကျွန်တော် စိတ် တွေ အနည်းငယ် ငြိမ် စပြုလာပါသည် ။ ကျွန်တော် ရင်ထဲ ပဲ့တင်ထပ်နေသည့် မေးခွန်း တစ်ခုကို ပါးစပ်က အသံ ထွက်အောင် ရွတ်ဆို မိပါတော့ ၏ ....
“ သူမ ကို တစ်ကယ်ပဲ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်မိ ခဲ့ တာလား ” .....
ကျွန်တော် ရင်ထဲက တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခု ချက်ချင်း ထွက်လာပါတယ် ကျွန်တော် သူမ ကို အရမ်းချစ်ပါတယ် မြတ်နိုးမိပါ သည် ။ အချစ်ဆိုတာ ဘာမှန် မသိပင်မဲ့ သူမ ကို ကျွန်တော် အရမ်း ချစ်မိပါတယ် ကျွန်တော် ဘဝမှာ ဒီလို ခံစားမှု့ မျိုး တခါ မှ မကြုံခဲ့ဘူး ပါ ၊ သူမကို အချစ် ဆိုတာထက် မြတ်နိုး တန်းဖိုး ထားရပါသည် ။
ကျွန်တော် မြတ်နိုး တန်းဖိုး ထား ချစ်ရ ပါသော သူမ နှင့် ကျွန်တော် ဆုံတွေ့ မှု့ က ဘယ်လိုမှ ကဗျာ မဆန်
ရေကြည်ရာမြတ်နုရာ ဆိုသလို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ရင်း အမိတိုင်းပြည် နှင့်ဝေးဝေးမှာ ရှိသည့် မဲဆောက် ဟု အမည်ရသောမြို့ လေးတွင် ရှိသည့် ပျော်ပွဲစားရုံ တစ်ခု မှာ အလုပ်လုပ်နေသော ကျွန်တော်နှင့် ဆင်းရဲသော မိသားစုအတွက် စွန့်စားကာ ၊ မျှော်လင့် ချက်များစွာ ဖြင့် တိုင်းတပါး သို့ ရောက်ကာမှ ပျော်ပွဲစားရုံ မှာ ရောင်းစားခံရမှန် မသိ ၊ လူကုန်ကူးခံ ရသော သူမ နှင့် ကျွန်တော် တွေ့ ဆုံမှု့ က ဘယ်လိုမှ ကဗျာ ဆန်နေမည်မဟုတ်ပါ ။
မျက်ရည်များနှင့် ကုန်ဆုံးခဲ့ သော နေရက် များကို အဆုံးသတ် မို့ကြိုးစားနေသော သူမ ကို ကျွန်တော် နှစ်သိမ့် ပေးခဲ့ မိပါသည် ။ ခဏ ဆိုတဲ့ အချိန်လေးမှာ ပင် သူမ ရဲ့ ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ စိတ်လေးက ကျွန်တော် ရင်ထဲ မသိမသာ ရောက်ခဲ့ တာပေါ့ ၊ မဖြစ်သင့် ဘူးလို့အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးနေတုန်း ကျွန်တော် နှလုံးသားမှာ သူမ ရောက်နေ ခဲ့ပါပြီ ။ ၃ လဆိုတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ ကျွန်တော် ဘဝ တစ်လုံးကို သူမ အတွက် ပေးဆပ် မို့ဝန်မလေးတဲ့ အခြေနေကို ရောက်ခဲ့ ပါတော့သည် ။
သူမ ကို ဒီ ဘဝ ထဲက စွဲထုတ် ပြီး ကျွန်တော် ဘဝ လက်တွဲ ဖော်အဖြစ် တစ်သက်လုံး ချစ်ခွင့် ရအောင် ကျွန်တော် ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ က သူမ ပေါ် ရောင်ပြန် ဟပ် မိတာပေါ့ ။ သူမ လည်း ကျွန်တော် ကို အရမ်း ချစ်တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ် သူမ ကြောင့် ကျွန်တော် ဘဝ ကို မထိခိုက်စေ ချင်တဲ့ သူမ ရဲ့ မတ္တာ က ၊ ကျွန်တော် ချစ်ခြင်းတွေ ထက် လျှော့နည်း မည်မဟုတ်ပါ ။ သူမ ကို အကြိမ်ကြိမ် ဒီ ဘဝ မှ တူတူ ထွက်ပြေးမို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပင်မဲ့ သူမကြောင့် ကျွန်တော် ဘဝ ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အလုပ် မျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး ဆိုပြီး သူမ မနေချင်တဲ့ ဘဝမှာ ကျွန်တော် ချစ်ခြင်းတွေ နှင့် သူမ အသက်ဆက်လျှက် ရှင်သန် နေထိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
တစ်နေ့တစ်နေ့ပို ချစ်လာရ လေလေ သူမ ဘဝ ကို သနားမိလေ ပါပဲ အချိန်တိုင်း သူမ နှင့် အတူ ဒီနေရာကနေ ထွက်ပြေး ကြမို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ဆုံးတော့ သူမ နှင့် ကျွန်တော် နားလည်မှု့တစ်ခု ရခဲ့ ပါသည် ။ ထို နားလည်မှု့ ကတော့ သူမ ရဲ့ သွေး ကို ဆေးခန်းတစ်ခုမှာ ရောဂါ ရှိမရှိ စစ်မည် ။ သူမ မှာ ဘာရောဂါ မှ မရှိ ရင် ကျွန်တော် နှင့်အတူ ထွက်ပြေး ကြမယ် လို့သူမ ကိုယ် တိုင် ဆုံးဖြတ် ပေးခဲ့ပါတယ် ။
အပြင်ထွက်ခွင့် မရသည့် သူမ ကိုယ်တိုင် သူမ ရဲ့ လက်ထိပ် ကို အပ် နှင့် ဖောက်ပြီ ကျလာသည့် သွေးများကို ပုလင်း ထဲသေသေချာချာ ထည့်ကာ မဲဆောက် မြို့ ရဲ့ NGO ဆေးခန်း တစ်ခု မှာ သွေးစစ်မို့ကျွန်တော် ဆေးခန်း ကို ရောက်လာခဲ့ပါသည် ။
ဆေးခန်းက ပေးတဲ့ ရက်ချိန် ဒီနေ့ မှာ ကျွန်တော် သွေးစစ်ထား တဲ့ အဖြေကို လာယူခဲ့ပါသည် … ဆရာဝန်က မင်း သူငယ်ချင်းရဲ့ သွေးမှာ HIV ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရှိနေပြီတဲ့ ရောဂါပိုးကို မပြန့် ပွားအောင် ထိန်းသိမ်း မို့လူနာကို အမြန် ဆုံး ဆေးခန်း ခေါ်လာမို့ပြောလိုက် သည့် အသံ က ကျွန်တော် နားထဲက အခု ထိမထွက်သေးပါဘူး ။
ကျွန်တော် စီးလာသော အငှားကာ ရပ်သွားပါသည် ။ အခုမှ ပတ်ဝန်း ကျင်း ကို ကြည့်မိပါတော့သည် ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်သော ပျော်ပွဲစားရုံး နှင့် တစ်လမ်း အလို ကျွန်တော် ကားသမားကို ပြောထားသော
နေရာသို့ရောက်နေပါပြီ ။ ကားသမားကို ကျသင့် ငွေပေးပြီး ကားသမား ပြန်အပ်ငွေ ကို မစောင့် တော့ပဲ ကားထဲက ခပ်မြန်မြန် ထွက်ခဲ့ပါသည် ။
ခပ်လှမ်းလှမ်း မှနေ၍ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်သော ပျော်ပွဲစား ရုံ ကြီး ဆီသို့လှမ်းကြည့်နေမိ ပါသည် ။ ကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာ တိကျတဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်တစ်ခု ချ လိုက်နိုင်ပြီ ။ ဒီ ဆုံးဖြတ် ချက်အတွက် ကျွန်တော် ဘာလုပ်လုပ်ရမည် ကို ကြိုတင် စီစဉ် ပြီးသော်လည်း အသေးစိပ် ပြန်တွေးနေမိ၏ ။ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ် ချက် အတွက် ဘယ်တော့မှ နောင်တ ရမည် မဟုတ်ပါ ။
ကျွန်တော် မြတ်နိုး တန်ဖိုး ထားရသော သူမ ကို ဒီလို နေရာမျိုး မှာ မထားခဲ့ နိုင်ပါ ။ လူ့ လောက ကြီးထဲကနေ မကြာမှီ ထွက်ခွာရတော့ မည့် သူမ ကို ကျောခိုင်းပြီး ထွက်ခွာ သွားမို့ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ ။ ရှင်သန်ခွင့် ရတဲ့ သူမ ရဲ့ အချိန် လေးမှာ သူမ ဘေးမှာ ကျွန်တော် ရှိနေချင် တယ်လေ …. ကျွန်တော် ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ သူမ ရဲ့ နောက်ဆုံ အချိန်ကို အေးချမ်း အောင် ဖန်တီး ပေး ချင်တယ် ဒါဟာ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ် ချက်ပါပဲ …။
သုံးနှစ်လောက် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ ဒီနေရာ မှာ အခြေနေရာရာ အားလုံ ကို ကျွန်တော် ကျွမ်းကျင် ပါသည် ။ သူမ ကို ဒီနေ ရာ ကနေ ခေါ်ထုတ်မို့အစောင့်တွေ ကို ပိုက်ဆံပေး လက်ထိုး လိုက်ပါသည် ။ အစောင့်က နာရီဝက်အဝင်းဒီနေရာကနေ ထွက်ခွာမို့ပြောပြီး နာရီဝက်ထိ တာဝန်ယူပေးမယ်လို့ ပြောထားပါသည် ။ ကျွန်တော်မှာ အချိန်သိမ့်မရပါ ။ ယူစရာ ပစ္စည်းများများမရှိ အသင့်ပြင်ထားတဲ့ ဘေးလွယ်အိပ် တစ်လုံး လွယ်လျှက် သူမ ရှိရာ အခန်းသို့ ခပ်မြန်မြန် ထွက်လာခဲ့ ပါသည် ။
အခန်း တံခါးကို အသာခေါက် လိုက်သည် … အထဲမှ သူမ တံခါး ဖွင့်လိုက်ပြီ ကျွန်တော် အထဲရောက်သည်နှင့် တံခါးပြန်ပိတ် လိုက်ပါသည် ။ သူမ က ကျွန်တော် မျက်နှာ ကို သေသေချာချာ ကြည့်လျှက် ….
“ မောင် …. ဆရာဝန် က ဘာပြောလဲ ဟင် ”
ကျွန်တော် သူမ ကို ရင်ခွင်ထဲ ဖတ်ထားလိုက်မိ၏ …………
“ ယမင်း …. မောင် တို့သွားရအောင်နော် … အချိန် မရဘူး ချစ်သူရယ် … အစောင့်တွေ ကို မောင် ပိုက်ဆံ ပေးထားတယ် ….သူတို့ က နာရီ ဝက် ပဲ အချိန်ပေးတယ် ကွာ ….…. မောင် တို့မြန်မြန် သွားရနော် …. ချစ်သူမှာ ဘာရောဂါမှ မရှိဘူး လို့ဆရာဝန် တွေက ပြောလိုက်တယ် မောင် တို့ဒီနေ ရာ ကနေ မြန်မြန်သွားရအောင်နော် ….”
သူမ ကျွန်တော် မျက်နှာကို ဒုတိယအကြိမ် သေသေချာချာ ကြည့်လျှက် ….
“ မောင် … ယမင်း ကို ဘယ်တုန်း က လိမ်ဘူးလို့လည်း မောင် ရယ် … မောင် မလိမ် တက်မှန် ယမင်း သိပါတယ် .. ယမင်း …. ကို …. မောင် ….. လိမ်နေတယ် ဆိုတာ… မောင့် …. မျက်နှာ မှာ ပေါ်နေတယ် မောင် ….
မောင့် ကို … ယမင်း အရမ်း ချစ်ပါတယ် … ယမင်း ရဲ့ ဘဝမှာ မောင် သာမရှိ ရင် … ယမင်း အသက်ဆက်ရှင်နေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး …. ယမင်း ကို နားလည်ပေးပါ မောင် ရယ် … ယမင်း အရမ်း ချစ်တဲ့ မောင် … ယမင်းကြောင့် ဘာမှ မဖြစ်စေချင် ဘူး …. ယမင်းမှာ ဟို ရောဂါ ရှိနေပြီ လို့ဆရာဝန် က ပြောလိုက်တယ် မှတ်လား … ယမင်းကို အမှန် တိုင်းပြောပါ မောင် … ယမင်း သေရမှာ မကြောက်ပါဘူး …ယမင်း ကြောင့် မောင် တစ်ခုခု ဖြစ်သွားမှာတော့ ယမင်း အရမ်း ကြောက်တယ် မောင် …..”
သူမ ပါးပြင် ပေါ် က မျက်ရည်တွေ ကျနေပါပြီ ကျွန်တော် လက်နှင့် အသာယာ သုတ်ပေးလိုက် သည် ….
“ ယမင်း ….. မောင် ပြောတာ နားထောင် ပါကွာ … မောင် မလိမ် တော့ ပါဘူး …… ဟုတ်ပါ တယ် … ယမင်း မှာ ဟို ရောဂါ ရှိ နေပြီတဲ့ … မောင် … ယမင်း ကို ဒီတိုင်းထားခဲ့ ရမှာ လား … မောင် ယမင်း ကို ဘယ်လောက် ချစ်တယ် ဆိုတာ ယမင်း သိပါတယ် …. ယမင်း အသက် ရှင် ခွင့် ရတဲ့ အချိန် လေးမှာ ယမင်း ဘေးမှာ မောင့် ကို ရှိနေခွင့် ပေးပါ …. ကွာ ……”
“မဟုတ်သေးဘူး …. မောင် …. ”
“ ယမင်း … သိပါတယ် … မောင် …… ယမင်း ကို ဘယ်လောက် ချစ်တယ်ဆို တာ ”
“ ယမင်း လို တန်ဖိုး မရှိ တော့ မိန်းကလေး တစ် ယောက် အတွက် မောင့် ဘဝ ကို မထိခိုက်စေ ချင်ဘူး ”
“ အကြောက် ဆုံးကတော့ ယမင်း ရဲ့ ရောဂါတွေ မောင် ဆီ ကူး သွားမှာ .... ယမင်း အကြောက် ဆုံးပဲ မောင် …”
“ မောင် … ယမင်း ကို အရမ်း ချစ်တယ် ဆို … ယမင်း မောင် ဆီက ဘာမှ မတောင်း ဆို ခဲ့ဘူးနော် …. ”
“ ယမင်း တစ်ခုလောက် တောင်းဆို ပါရစေ …. မောင် …. ယမင်း ကို ချစ်တယ် ဆို ရင် … ယမင်း ပြော စကားနားထောင်ပါနော် … ယမင်း ဘဝ နဲ့ယမင်း ရှိပါစေတော့ ….. မောင် …. ရယ် …. ယမင်း ကို ထားခဲ့ ပြီ ဒီနေ ရာနေ ဝေးတဲ့ နေရာ ကို ထွက်သွားပါတော့ နော် …. ”
သူမ ရဲ့ ပါးပြင် မှာ မျက်ရည် အပြည့်ပေါ့ ….. သူမ ကျွန်တော် ရှေ့ မှာ ဒူးထောက် ချလိုက်ပါသည် ….. ကလေး တစ်ယောက် လို ငို သံနှင့် ……..
“ ယမင်း တောင်းပန်ပါတယ် မောင် ရယ် ……. ယမင်း … မောင့် ကို အရမ်း ချစ်လို့ပါ … ယမင်း ကြောင့် မောင့် … ကို ဘာမှ မထိခိုက် စေချင် ဘူး …. ယမင်း ကို ထား ခဲ့ ပြီး သွားပါတော့ နော် …
ယမင်း တောင်းပန်ပါတယ် ….”
ကျွန်တော် လည်း သူမ ကဲ့သို့ဒူးထောက် ချလိုက်ပါ သည် ။ သူမ ကို ဒုတိအကြိမ် ဖက်ထား လိုက်မိ ၏ … ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ချက် တွေ ကို ကျွန်တော် ပြောင်း လှဲ မည်မဟုတ်ပါ …….
“ ..မောင် … ယမင်း ကို ထားခဲ့ ရမယ် … မဖြစ် နိုင်တာ ကွာ … ယမင်း မရှိပဲ မောင် ဘယ်လို နေ မလည်း ယမင်း ရယ် …. ”
“ မောင့် အတွက် မစိုးရိမ် နဲ့ နော် … မောင့် ဆီ ကို ယမင်း ရဲ့ ရောဂါ တွေ မကူးအောင် မောင် နေမှာပေါ့ … ဒီနေ့ဆေးခန်း က မောင့် ကို စာအုပ်တစ်အုပ် ပေးလိုက်တယ်လေ ….”
“ HIV ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး ရှိတဲ့ သူနှင့် အတူနေထိုင်ရင် ရောဂါ မကူးစပ် အောင် ဘယ်လို နေရမယ် ဆို တဲ့ အကြောင်း တွေ ရေးထားတာ ယမင်း ရဲ့ …. ”
“ မောင့် အတွက် ယမင်း ကို မောင့် အနားမှာ ထားပြီး ချစ်ခွင့် ရနေရင် … မောင် ကျေနပ်ပါပြီ ….ယမင်း ကို ထားခဲ့ မို့ တာ့ ဘယ်လို မှ မဖြစ် နိုင်ဘူး …. ကွာ …”
“ အချိန် မရဘူး ယမင်း …. ဒီလို အခြေ နေ ကို တစ်ယောက် ယောက် မြင် သွားရင် …မောင် ရော …ယမင်း ပါ ဘာဖြစ် မယ် ဆိုတာ … ယမင်း သိပါတယ် ….မောင် တို့သွားရအောင်နော် … ”
သူမ ရဲ့ လက်နှစ်ဖက် က ကျွန်တော် ခါး ကို တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် ဖတ် ထား ပါသည် …
“ မောင် …. ရယ် … ယမင်း လို တန်ဖိုး မရှိ တဲ့ သူ တစ်ယောက်ကို ချစ် ပေးတဲ့ အတွက် …. မောင့် ..ကို ယမင်း တစ်သက်လုံး မေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး … ယမင်း လည်း မောင့် ဘေး မှာ …… မောင့် အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ကို လုပ်ပေးရင်း … ယမင်း ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်တွေ မောင့် နားမှာပဲ နေချင်တာပေါ့ …”
“ မောင် … ယမင်း ကို ကတိ တစ်ခု ပေးပါလား …. ”
“ ယမင်း ရောဂါ တွေ မောင့် ဆီကို မကူးအောင် နေကြမယ် လို့မောင် ကတိ ပါနော် …. ယမင်း ကို နားလည် ပေးပါ …မောင် ….. ယမင်း …. တန်ဖိုးထား ချစ်ရတဲ့ မောင့်ကို ယမင်း ကြောင့် ဘာမှ မဖြစ်စေချင်ဘူး … မောင် ကတိ ပေးတယ်ဆိုရင် … ယမင်းရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန် တွေ ကို မောင့် အတွက် …. ရှင်သန် ချင် လို့ ပါ …မောင် ….”
ကျွန်တော် ယမင်း ၏ မျက်နှာလေးကို သေသချောချာ စိုက်ကြည့်လိုက် သည် ……….
“ မောင် … ကတိ ပေးပါ …တယ် … ချစ်သူ …….”
“ မောင် ဘာမှ မဖြစ်အောင် နေမယ်နော် …. ”
“ … မောင် တို့အချိန် မရဘူး … သွားရအောင်နော် … ယမင်း လိုမဲ့ ပစ္စည်း လောက် ပဲ ယူ ခဲ့နော် …”
ကျွန်တော် လက်က နာရီ ကို ကြည့်မိလိုက်သည် ….
“ ယမင်း ၅ မိနစ်ပဲ လိုတော့တယ် …. ဘာ ပစ္စည်း မှ ယူမနေ နဲ့ တော့ နော် …”
သူမ နှင့် ကျွန်တော် တူတူရပ် လိုက်သည် … သူမ လက်လေး ကို စုတ်ကိုင် ရင်း …
“ မောင် …ပြောတာ သေချာ နားထောင် … မောင် တို့အနောက်ဘက် က နေ ထွက်မယ် … မောင့် နောက် က နေ ပုံ မှန် ပဲ လိုက်လာ ခဲ့ နော် … ယမင်း ဘာမှ မကြောက် နဲ့ ဟုတ်ပြီလား …. ”
သူမ ပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည် တွေကို သုတ်လိုက်သည် ။ ကျွန်တော် ပြောတဲ့ စကားကို ကလေးတစ် လို နားထောင်းနေ၏ ။ အခုမှ သူမ မျက်နှာ ပေါ်မှာ ကြောက်စိတ် ဝင်နေသည် ထင်မိပါသည် … သူမ ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေ က ကျွန်တော် ကို အားကိုးလိုတဲ့ အကြည့်လေးနှင့် ကျွန်တော် ကို ကြည့်နေပါသည်။
ကျွန်တော် အတွက် အချိန် မရပါ … ။
အခြေအနေ အရ အမြဲပြောင်းလှဲ တက်သည်ကို သဘောပါက်ထားပါသည် ..။့ အသင့် ကိုင်ထားတဲ့ လက်ထဲက ပိုက်ဆံ ဘတ်ငွေ ၅၀၀ ခန့်ကို ကျစ်ကျစ် ပါအောင် ဆုပ်ကိုင် ထားမိသည် ။
ကျွန်တော် အတွက် ကံတရားက သာ အားကိုးရာ အခြေနေ သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် အချိန် စွဲမနေတော့ပါ … သူမ အခန်း တံခါး ကိုဖွင့် ပြီး ကျွန်တော် ဝင်ခဲ့သော လမ်းအတိုင်း မှန်မှန် လျှောက်လာခဲ့ပါသည် ။ ကျွန်တော် အနောက် ခြေလမ်း ၁၀ လှမ်း ခန့်အကွာတွင် သူမ လိုက်လာခဲ့သည် ကို ကျွန်တော် သတိပြုမိသည် ….. ။
ကံတရား ကမျက်နှာသာ ပေးလိုက်သည် ထင်မိပါသည် … ကျွန်တော် တို့အတားဆီးမရှိ ပျော်ပွဲစားရုံ ကြီး ၏ အနောက်ဘက်သို့သွားရာလမ်း ပေါ်သို့ ရောက်ခဲ့ပါသည် … ။
ကျွန်တော် အတွေးမဆုံးခင် … ကျွန်တော် ခြေလှမ်းတွေ အနည်း ငယ် တွန့် သွား ပါတော့သည် … ကျွန်တော် ရှေ့ပေ ၂၀ ခန့် အကွာတွင် .. ကျွန် တော် ပိုက်ဆံ ပေးခဲ့ သော အဖွဲ့ မှ အစောင့် တစ်ဦး ကျွန်တော် ကို တွေ့ သွားပါသည် ။ ထို အစောင့်မှာ ကျွန်တော် အား သူလက်ထဲမှ နာရီ ကို လက်ညိုး ထိုးပြနေသည် … ။
ကျွန်တော် နားလည်းပါသည် ။ အချိန်ပြည့်နေပြီပေါ့ … ကျွန်တော် ခြေလှမ်းတွေ အစောင့်ဆီ သို့ခပ်မြန်မြန် လှမ်း ခဲ့မိသည် ။ အနားသို့ အရောက်တွင် ဘာစကားမှ မပြောပဲ လက်ထဲက အသင့်ပါလာ ငွေ အကုန် မသိမသာ ထိုသူ၏ လက်ထဲ သို့ ထည့်ပေးလိုက်ပါသည် ။ ခပ်မြန်မြန် ဆိုတဲ့ ထိုသူ ၏ အကြည့်ကြောင့် ပျော်ပွဲစားရုံ ကြီး နောက်ဘက် သို့ကျွန်တော် ရောက်ခဲ့ပါ သည် ….။ ခဏ ဆိုတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ သူမ ရောက်ခဲ့ပါသည် ။
သူမရဲ့ အေးစက်နေတဲ့ လက်လေးကို ဆုပ်ကိုင်းပြီး ….
“ ယမင်း မြန်မြန် သွားရအောင်နော် … ဒီနေရာက မလုံခြုံသေးဘူး …”
သူမ လက်ကို တွဲ လျှက် ကျွန်တော် တို့ခပ်မြန်မြန် ပျော်ပွဲစားရုံ ကြီးနှင့် ဝေး ရာအရပ် ကို ရောက် ခဲ့ပါပြီ ….။
သူမ မျက်နှာ ပေါ်က ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးသော အပြုံး တစ်ပွင့် နှင့် အတူ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ ဘဝ သစ်ကို စတင်ခဲ့ ပါပြီ …… ။
အချိန်ဆိုတာ ကုန်လွယ် တက်သည်လော … တစ်နှစ် ဆိုတဲ့ ချိန်အတွင်းမှာ ကျွန်တော် မြတ်နိုးတန်းဖိုးထားရပါသော ချစ်ဇနီး နှင့် အတူ ဖြတ်သန်း ခဲ့ တာ မြန်လွန်းတယ်လို့ထင်မိပါတယ် …
ကျွန်တော် တို့မဲဆောက် မြို့ နဲ့ဝေးဝေးမှာ ရှိတဲ့ မြို့ လေးတစ်မြို့မှာ အကိုဝမ်းကွဲ တစ်ယောက်ရဲ့ အကူညီ နှင့် ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင် ခဲ့ပါသည် … တစ်ရက် ဘတ် ၂၀၀ ဆိုတဲ့ ကျွန်တော် လုပ်အား ခ ငွေဟာ ကျွန်တော် နှစ်ယောက် အတွက် ပြည့်စုံတယ်လို့မဆိုပင်မဲ့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မဆင်းရဲ ခဲ့ရပါဘူး …။
သူမ ကို ဒီမြို့ လေး ရဲ့ NGO ဆေးခန်း မှာ လစဉ် ဆေးမှတ်တမ်း ထားပြီး သူမ မှာ ရှိတဲ့ HIV ပိုးတွေ မပြန့် ပွားအောင် နေ့ စဉ်နှင့် အမျှ အေအာတီ လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေ သောက်နေရတာပေါ့ …။
သူမ ကို ကတိ ပေးတဲ့ အတိုင်း သူမ ဆီ က ရောဂါ ကျွန်တော် ဆီ မကူး အောင် သူမ ကပင် အထူးဂရု စိုက်နေထိုင် ခဲ့ပါသည် … အစ တုန်း က ကျွန်တော် စိတ်တွေ သတိ လက်လွတ်ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ အချိန် တိုင်းမှာ သူမ က မကြာခဏ ဆိုသလို သတိ ပေးခဲ့ပါတယ် ။ တစ်နှစ် ဆိုတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် နေသားကျ သွားပါပြီ ။
သူမ နေ့ စဉ်နှင့် မျှ ဆေး သောက်နေသော် လည်း တစ်နှစ် ဆိုတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ သူမ ရဲ့ နုပျို မှု့ တွေ သိသိသာ ကုန်ဆုံး ခဲ့ပါပြီ ။ တစ်ခါ တစ်ခါ ချောင်းဆိုး လျှင် အရင် က တစ်ရက် နှစ် နှင့် ပြောက်သွားတက်သော် လည်း အခု တစ်ပတ် ဆယ်ရက် ကြာထိ ပြောက် တက်ပေ … မကြာ ခဏ ဆိုသလို သူမ မောတက်နေပါပြီ ။
သူမ ရဲ့ နုပျိုမှု့တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကုန်ဆုံးသွားပါစေ သူမ ဟာ ကျွန်တော် အတွက် ထာဝရ လှပ နေသော ပန်းချီ ကား တစ်ချပ် ပမာ ရှု့ မဝ အောင်ရှိနေပါ သည် ။
သန့် ရှင်းသပ်ရပ်စွာ နေထိုင်တက်ပြီ ဖြူစင်တဲ့ သူမ ရဲ့ ပင်ကိုယ် စိတ်လေး နှင့် ကျွန်တော် ပေါ် ချစ်မြတ်နိုး တဲ့ သူမ ကို ကျန်ရှိနေသေးသော အချိန်လေး မှာ
ကျွန်တော် မြတ်နိုးနိုး တန်ဖိုးထား ၍ ချစ် ရပါတော့ သည် …..။
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:17 AM
Labels: ရေးမိသော ဝတ္တု တို
ကိုရင် December 15, 2011 at 9:17 AM
သက်ရှိဖြစ်စေ သက်မဲ့ဖြစ်စေ ကိုယ်တန်ဖိုးထားနေသရွေ့  ဘယ်လောက်ပဲ နှစ်ပေါင်းကြာရှည်ပါစေ နွေးထွေးဆဲ သစ်လွင်ဆဲပါပဲဗျာ..
သမီးစံ December 15, 2011 at 9:28 AM
အိမ်မက်စေရာ December 15, 2011 at 10:36 AM
ချစ်သူတစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တန်ဖိုးထား နားလည်ပြီး ချစ်တက်ကြဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်..း)
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဝတ္ထုလေး ခံစားသွားတယ်..
လမင်းငယ် December 15, 2011 at 5:28 PM
chocolatecupidlay December 15, 2011 at 6:15 PM
မဒမ်ကိုး December 15, 2011 at 7:43 PM
စိတ်မကောင်းးရာကောင်းပေမယ့် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာတွေနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘ၀လေးတွေအချိန်လေးတွေကိုလေးစားအားကျရင်းး
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် December 15, 2011 at 8:43 PM
တန်ဖိုးဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ရာကောင်းဝတ္ထုလေးပါပဲဗျာ
jasmine(တောင်ကြီး) December 15, 2011 at 10:21 PM
ဘိုဖြူ December 15, 2011 at 10:30 PM
အဲတာက တကယ် အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတွေပါပဲ